Permalink Reply by 29a6k549qdbrt on June 21, 2012 at 20:51
many many thanks to u , ko myint ko.
Permalink Reply by than htay on June 23, 2012 at 20:13
Permalink Reply by U Aung Kyaw Oo on June 25, 2012 at 17:04
Dear Ko Myint Ko,
Thank you for your translated article of A.J.Hoge. I would like to get his lessons,some are free and some are pay money.I don't have credit card. I think everything cannot be gotten free.Please advise me.
Permalink Reply by thwe thwe phyo on June 26, 2012 at 9:25
Tksalot for your help.I'll try it.
Permalink Reply by War Lay on June 29, 2012 at 14:21
Thanks so much for hints improving english speaking are good help ....
Permalink Reply by Gyit on June 29, 2012 at 21:34
Your sharing is excellent & get encouragement for me,,,,Thks
Permalink Reply by Lity on June 30, 2012 at 9:57
May i share to my friends those who are trying and learning in English.
Permalink Reply by ko Myintko on June 30, 2012 at 10:18
Sure, I'll thanks you very much for your sharing.
Permalink Reply by 05kjs88u2l526 on June 30, 2012 at 12:11
So Great ,wonderful!!!
Permalink Reply by thidalwin on June 30, 2012 at 17:37
Permalink Reply by Ei The Phyu on July 2, 2012 at 13:02
Permalink Reply by ko Myintko on July 7, 2012 at 13:44
ကျွန်တော်ဆီမှာ Spotlight Radio ကနေ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ထားတဲ့ စာနဲ့ အသံတွဲလျက် တနှစ်စာ(2009) ရှိနေပါတယ်။ တစ်ပတ်မှာ ဆောင်းပါး7ပုဒ် တပုဒ်အတွက် အသံက 15 မိနစ်စာနဲ့ တင်ထားပါတယ်။ ၇ပုဒ်ဆိုတော့ တစ်နာရီခွဲစာ အသံလို့ ဆိုရမှာပေါ့နော်။ တလမှာ 49 ပုဒ် + အသံ6နာရီ လောက်တော့ ရှိပါမယ်။ Beginner Listener တွေ အတွက် သင့်တော်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ စာဖိုင်ကို Microsoft word နဲ့ စာအုပ်ပုံစံ တ၀က်လုပ်ပြီးပါပြီ။ အချိန် မပေးနိုင်သေးလို့ တ၀က်လောက် ကျန်နေပါသေးတယ်။ စာအုပ်ပုံစံ လုပ်ဖို့ ကူညီနိုင်မယ့် ညီ ညီမများရှိရင် ကူညီပေးကြပါ။ လိုချင်ရင် အီးမေးလ်နဲ့ ပို့ပေးပါမယ်။ စာကို အီးမေးလ်နဲ့ ပို့ပေးလို့ရပေမယ့် အသံကို အီးမေးလ်နဲ့ ပို့လို့ အဆင်ပြေမယ် မထင်ပါ။ အသံကို ရန်ကုန်ကို memory Stick နဲ့ ပို့ပေးမှ အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။ လက်ခံပြီး ဖြန့်ဝေလိုသူများရှိခဲ့ရင် ကျွန်တော့်မေးထဲမှာ ပို့ပေးရမယ့် လိပ်စာလေး ပို့ပေး စေချင်ပါတယ်။
2010 တနှစ်စာ စာနဲ့ အသံကိုတော့ ဒေါင်းလုပ် လုပ်ထားပါတယ်။ မူရင်းအတိုင်းပဲ ရှိပါသေးတယ်။